नेपालमा भारु व्यवस्थापनको चुनौती - Karobar National Economic Daily
नेपालमा भारु व्यवस्थापनको चुनौती
query_builderDecember 22, 2016 10:49 AM supervisor_accountडा. गोविन्दबहादुर थापा visibility784
भारतले कात्तिक २३, २०७३ अर्थात् ८ नोभेम्बर २०१६ देखि भारु ५ सय र १ हजार दरका नोट कानुनी रूपमा अमान्य हुने घोषणा ग¥यो । त्यसैको परिणामस्वरूप अहिले भारतले तत्काल नेपाललाई अमेरिकी डलर लिएर आफ्नो मुद्रा बिक्री गर्न नसकिने बताएपछि नेपालमा भारुका कारण अर्को संकट आउने भएको छ ।
मुख्य रूपमा नेपाल–भारतबीचको व्यापारघाटा बढ्दै जान थालेदेखि नेपालमा भारतीय मुद्राको अभाव हुँदै आएको हो । र, नेपाल राष्ट्र बैंकले आफूसँग भएको अमेरिकी डलर भारतीय रिजर्भ बैंक (भारतको केन्द्रीय बैंक) लाई बिक्री गरी उसबाट भारतीय मुद्रा खरिद गरी काम चलाउँदै आएको थियो ।
त्यसरी ल्याइने भारतीय मुद्रालाई नेपाल राष्ट्र बैंकले नियन्त्रित ढंगले आवश्यक पर्ने व्यक्तिहरूलाई आफैं र वाणिज्य बैंकहरूमार्फत बिक्री गर्दै आएको थियो । यसरी बिक्री गरिने भारतीय मुद्रा मागअनुसार हुँदैनथ्यो । तथापि जसोतसो काम चलिरहेको थियोे ।
डलर बिक्री गरेर भारु खरिद गर्ने व्यवस्था सुरु गर्नुअघि भारतबाट सोझै डलर भुक्तानी गरी औद्योगिक कच्चापदार्थ र औद्योगिक मेसिनरी आयात गर्ने व्यवस्था सुरु गरिएको थियो । यसो गर्दा औद्योगिक कच्चा पदार्थ र मेसिनरी सस्तो पर्ने र त्यसबाट उत्पादित नेपाली वस्तुको निर्यातका लागि प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता पनि बढ्ने अपेक्षा गरिएको थियो ।
अहिले त्यसरी गरिने आयात वृद्धि हुँदै गएर यो वर्षको पहिलो चार महिनाको अवधिमा २६ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । यो भारतबाट भएको कुल आयातको १३.८ प्रतिशत हो । नाकाबन्दीका बाबजुद पनि गएको वर्ष सोझै डलर भुक्तान गरी भारतबाट ७० अर्ब २० करोड रुपैयाँको आयात भएको थियो ।
यो रकम त्यो वर्ष भारतबाट भएको कुल आयातको १४.७ प्रतिशत थियो । यो वर्षको पहिलो चार महिनामा भारतबाट भएको कुल आयातमध्ये १३.८ प्रतिशत डलरबाटै भुक्तानी भई बाँकी रहेको ८६.२ प्रतिशत अर्थात् १ खर्ब ६८ अर्ब २२ करोड भारतीय मुद्रामा नै भुक्तानी गरिएको छ । यसमा भुक्तानीका उपकरण विभिन्न हुने भए पनि रकम भने त्यति नै हो ।
जबकि यसै अवधिमा नेपाल राष्ट्र बैंकले अमेरिकी डलर बिक्री गरेर खरिद गरेको भारतीय मुद्रा १ खर्ब ३९ अर्ब रुपैयाँ (भा.रु. ८६ अर्ब ८८ करोड) छ । बाँकी २९ करोड २२ लाख रुपैयाँमध्ये यस अवधिमा भारततर्फ भएको निर्यातबाट पूर्ति गरिएको मान्नुपर्छ ।
भारतीय रिजर्भ बैंकबाट अब झट्टै डलर बिक्री गरेर भारु नपाइने भएपछि अब नेपाल राष्ट्र बैंकसँग पहिलेझैं बिक्री गर्ने भारतीय मुद्रा हुनेछैन । अब यसरी भारतीय मुद्रा नपाइने भएपछि अब नेपालले भारतीय मुद्राको माग कसरी पूर्ति गर्ला ? भारतीय मुद्रा नभइनहुनेहरूले कसरी काम चलाउलान् ? सबै कुरा भारतबाटै आयात गरेर व्यवहार चलाउनुपर्ने नेपालका लागि यो कम अजङ्गको चुनौती होइन ।
नेपाल–भारतबीचको व्यापारमा नेपाललाई यति ठूलो घाटा हुने गरेको छ र त्यस्तो घाटा यति तीव्र दरले बढ्दै गएको छ कि त्यो घाटा नेपालले विभिन्न व्यापारिक तथा व्यावसायिक कारोबारबाट आर्जन गर्ने भारतीय मुद्राले एक छेउ पनि पूर्ति हुँदैन ।
उदाहरणका निम्ति यो वर्षको कात्तिक महिनासम्मको चार महिनामा नेपालबाट भारततर्फ भएको निर्यात जम्मा १३ अर्ब ६० लाख रुपैयाँबराबरको र आयात १ सय ९५ अर्ब १५ करोड रुपैयाँको भई चार महिनामा नेपाललाई १ सय ८१ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँको घाटा भएको थियो ।
यस अवधिमा नेपालको भारततर्फको निर्यातले त्यहाँबाट भएको आयातको ७ प्रतिशत अंश मात्र पूर्ति गरेको थियो । तर, रेमिट्यान्सबाट पर्याप्त विदशी मुद्रा भित्रिइरहेकाले र डलर बिक्री गरेर भारतीय रिजर्भ बैंकबाट चाहिएजति (वार्षिक ६ अर्ब भारु खरिद गर्न पाईने सीमा थियो) भारतीय मुद्रा खरिद गर्न पाइएकाले नेपाल राष्ट्र बैंकले भारतीय मुद्रा आपूर्ति गर्न सकिरहेकोे थियो । त्यसबाट अत्यावश्यकीय सटही र भुक्तानी गर्न सकिएकोे थियो ।
तर, अब सीमित निर्यात, भारतीय पर्यटक, पूर्वभारतीय सैनिकको पेन्सन र भारतबाट आउने रेमिट्यान्सबाट मात्र आर्जन हुने भारुबाट काम चलाउनुपर्ने भएको छ ।
बैंकिङ प्रणालीमार्फत हुने आयातको भुक्तानी गर्न कुनै न कुनै उपाय निस्कला, तर बैंकिङ प्रणाली बाहिरबाट गरिने आयातको भुक्तानीमा समस्या पर्ने देखिन्छ । विशेष गरी तीर्थाटन र स्वास्थ्योपचारका लागि भारत जाने नेपालीहरूले भारतीय मुद्रा अभावको चर्को समस्या सामना गर्नुपर्नेछ ।
यो स्थिति लामो समयसम्म कायम रह्यो र नेपाली अर्थतन्त्रमा त्यसको गम्भीर असर पर्ने देखिएमा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोषसँग भारतीय मुद्राको सहयोगका लागि आग्रह गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ । तर यो पनि अल्पकालीन व्यवस्था मात्र हुनेछ । त्यस्तो स्थिति आयो भने नेपालले पेट्रोलियम पदार्थ र अन्य महŒवपूर्ण वस्तुहरूको आयातको पनि अमेरिकी डलरबाटै भुक्तानी दिनुपर्ने अवस्था आउन सक्छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले भारुको अभाव भइरहेको अवस्थामा त्यसको माग गर्न आउनेहरूलाई भारुको असीमित परिवत्र्यता उपलब्ध गराउनैपर्ने व्यवस्था छ । त्यो व्यवस्था खारेज गर्न नसकिने होइन, तर देशको कुल वैदेशिक व्यापारको दुईतिहाइ अंश व्यापार हुने मुलुकको मुद्रा मागबमोजिम उपलब्ध गराउन नसक्नु देशको केन्द्रीय बैंकको ठूलो कमजोरी ठहर्छ र त्यसरी काम पनि चल्दैन ।
साथै, नेपालमा व्यापार–व्यवसाय गरिरहेका भारतीय व्यापारी, व्यवसायी तथा कामदारहरूले पनि भारुको माग गर्छन् । उनीहरूलाई मागबमोजिम भारु नदिँदा नोक्सान उनीहरूलाई मात्र हँुदैन, नेपाललाई पनि हुन्छ । र, उनीहरूलाई भारुको सट्टा डलर लैजाऊ भन्ने कुरा आउँदैन ।
त्यसैले नेपालले मागबमोजिम भारु उपलब्ध गराउनुपर्छ र भारतीय रिजर्भ बैंकले डलर लिएर नेपाललाई भारु उपलब्ध गराउनुपर्छ । परिवत्र्य विदेशी मुद्राको पर्याप्त सञ्चिति नभएको भारतले वस्तु निर्यातबाट भन्दा सजिलो र सुरक्षित रूपमा पाइने त्यस्तो मुद्रा सहर्ष स्वीकार गर्नेछ भन्ने विश्वास गर्नुपर्छ ।
अहिले उसले ५ सय र १ हजार दरका नोटहरूलाई प्रतिस्थापित गरी ५ सय र २ हजार दरका नयाँ नोट चलनचल्तीमा ल्याउन अत्यधिक ठूलो संख्यामा नयाँ नोट छपाइ गर्नुपरेको र त्यसलाई देशभित्रै व्यवस्थापन गर्न समय लागेकाले तत्काल नेपाललाई नयाँ नोट दिन नसकिने भनेको हुन सक्छ । तर, नेपालको अर्थतन्त्रमा भारतीय मुद्राको महत्वलाई दृष्टिगत गरी भारतले नेपाललाई नयाँ नोट उपलब्ध गराउनुपर्ने थियो ।
तर, नेपालले हाल गरिरहेको डलर बिक्री गरेर भारु खरिद गरी त्यसलाई देशभित्र बिक्री गर्ने कार्य आफंैमा स्थायी, भरपर्दो र टिकाउ कार्य हो भनेर मान्न सकिँदैन । र, यो उत्तिकै जोखिमपूर्ण पनि छ । अहिलेसम्म वैदेशिक रोजगारीबाट प्रचुर मात्रामा विदेशी मुद्रा भित्रिइरहेको छ र हामीले त्यही मुद्रा बिक्री गरेर भारु खरिद गरिरहेका छौंं ।
तर अहिले नै वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीहरूको संख्या लगातार घट्दै गइरहेको र त्यहीअनुरूप विप्रेषण आयको वृद्धिदर पनि घट्न थालेका समाचारहरू सार्वजनिक भइरहेका छन् । रोजगारदाता मुलुक तथा क्षेत्रहरूको राजनीतिक तथा आर्थिक स्थिति विभिन्न कारणले डावाँडोल हुँदै गएकाले त्यहाँ रोजगारीका अवसरहरू अझ घट्दै जाने बलियो सम्भावना छ ।
साथै, देशहरू विकासको माथिल्लो चरणमा उक्लेपछि ती मुलुकमा पहिलेझैं श्रममूलक कामहरू घट्दै जान्छन् । उच्च प्राविधिक जनशक्तिको माग बढ्न थाल्छ । तर, वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीहरू त्यस किसिमका नहुने भएकाले वैदेशिक रोजगारीका अवसर विगतमा झैं उपलब्ध हुन सक्दैनन् ।
त्यसैले रेमिट्यान्स आय टिकाउ र भरपर्दो हुँदैन । त्यो स्थितिमा भारु खरिद गर्नका लागि अहिलेझैं जत्ति पनि विदेशी मुद्रा खर्च गर्न सकिने अवस्था रहनेछैन । विदेशी मुद्रा आर्जनको भरपर्दो र टिकाउ स्रोत निर्यात नै हो, नेपालको सन्दर्भमा पर्यटन पनि हो । त्यसैले यसमा जोड दिनु भविष्य सुरक्षित बनाउनु हो ।
नेपाल राष्ट्र बैंक भारु व्यवस्थापन